बाख्राले भविष्य बनाईदिने आशमा... : RajdhaniDaily.com -
Home अर्थ बाख्राले भविष्य बनाईदिने आशमा...
जनकपुरधाम । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका १ कि ललिता लामा निकै खुशी छिन् । आज उसले ५ वटा बाख्रा पाएकी छिन् । उनलाई लागेको छ अब ३–४ महिनामै यी बाख्रा आम्दानीको स्रोत बन्ने छ । कोरोनाका कारण खान बस्नसम्मको समस्या भोगेकी ललितले यीनै बाख्राले आफ्नो जिवनमा परिवर्तन ल्याउने सोचेकी छिन् ।
कोराना संक्रमण महामारीले रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न तथा गरीव परिवारहरुलाई यूएनडिपी र सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाको संयुक्त साझेदारीमा संचालित परियोजनाले बाख्रा वितरण गरेको छ । गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ५ मा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारहरुलाई आर्थिक उन्नतिमा टेवा पु-याउने उद्देश्यले बाख्रा वितण गरिएको संस्थाले जनाएको छ । प्रत्येक किसानलाई ५ वटा वाख्राको दरले ३३ घरधुरीलाई १६५ वटा बाख्रा वितरण गरिएको सामुदायिक सुधार केन्द धनुषाका अध्यक्ष संजय साहले वताए । पाँच घरलाई उन्नत जातको बोका बितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बाख्रालाई मासु, दुध, र मलको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । धनुषामा सयौं किसान बाख्रा पालनमा सक्रिय छन् । जो व्यवासायमा लागेकाहरुले अन्य काम गर्न नपर्ने भुक्तभोगीको भनाई छ
बाख्रालाई मासु, दुध, र मलको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । धनुषामा सयौं किसान बाख्रा पालनमा सक्रिय छन् । जो व्यवासायमा लागेकाहरुले अन्य काम गर्न नपर्ने भुक्तभोगीको भनाई छ । गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका ५ का गंगा भूजेल पनि अब बाख्रा पालनमै सक्रिय हुने बताउछिन् । ‘४–५ महिनामा एउटा बाख्रा बिक्री गर्दा ५–६ हजार आम्दानी हुनसक्छ ।’ भुजेलले भने । उनले पनि यहि संस्थाबाट बाख्रा पाएका छिन् ।
गाउँमै मजुदूरी गरि पेट पालिरहेका भुजेलले ७–८ महिनादेखि टोलमा कुनै रहत नआएको बताए । बाख्रा वितरण गर्दै सामुदायिक सुधार केन्द्रका परियोजना संयोजक श्रीराम दुलार यादवले कोभिड १९ बाट प्रभावित परिवारहरुलाई सामाजिक तथा आर्थिक पुर्नलाभका साथ साथै व्यवसायिक बाख्रा पालनमा समेत ठुलो सहयोग हुने वताए । हस्तान्तरण गरिएका बाख्राहरुलाई पशु चिकित्सक टोलीले चेक जाँच गरि लिभर टनिक र जुकाको औषधीहरु खुवाईएको थियो । बाख्राहरुलाई व्यवस्थित बासस्थानका लागि ३३ वटा बाख्राको खोर समेत निर्माण गर्ने र स्थानियको माँग अनुसारको पौष्टिक अहारहरु समेत उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
रासस - February 16, 2020 0
किन गए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कालापानी क्षेत्र ?
राजधानी संवाददाता - February 17, 2020 0
दार्चुला । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सीमा निरीक्षणका क्रममा कालापानी क्षेत्र प्रस्थान गरेका छन् । आज सोमबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत...
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगत्तै सरकारले ठूलो संख्यामा सचिवहरूको सरुवा गरेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ गरेलगत्तै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा...
बिचार राजधानी संवाददाता - May 4, 2020 0
बिचार डा. दयाराम श्रेष्ठ - August 30, 2020 0
लक्षणविहीन संक्रमितबाट कोरोना भाइरस सर्दैन : डब्लुएचओ
भर्खरै एजेन्सी - June 10, 2020 0
जुरिच । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले लक्षण नै नदेखिएको तर कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिबाट अर्को ब्यक्तिमा संक्रमण सर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएको छ...
रौतहट । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नम्बर २ ले पार्टीका रौतहट जिल्ला कमिटी सदस्य रामएकवाल मुखिया...